Thibaut Courtois: Qalbigaygu Waa Madrid | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Thibaut Courtois: Qalbigaygu Waa Madrid
Thibaut Courtois ayaa sii watay wararka ku saabsan xanta suuqa kala iibsiga ee la xiriirineysa Real Madrid, isagoo sheegay inuu wadnihiisu yahay Madrid”, inkastoo uu wadahadalo heshiis cusub uu ku saxiixayo uu kula jiro kooxda Chelsea.
25 jirkaan oo qandaraaska uu kula joogo Chelsea dhacayo sannadka 2019, waxaa lagu soo waramayaa inuu bartilmaameed u yahay inuu kooxda Real Madrid.
Wareysi uu siiyay wargeyska Sport / Foot Magazine ee kasoo baxa dalkiisa Belgium, Courtois ayaa ku xaqiijiyay in wadahadalada uu kula jiro Chelsea ay sii socan doonaan, laakiin sidoo kale wuxuu ka hadlay sida uu u jecel yahay Madrid, halkaasoo labadiisa caruur ay ku noolyihiin.
“Xaaladayda shakhsiyeed waxay la xiriirtaa magaalada Madrid,” ayuu yiri “Labadayda caruur halkaa ayay ku nool yihiin, gabadheyda waxay ii sheegta in ay aad igu xiistay, Way yartahay inaan u sheego inta aan ka maqnaan karo.
“Markasta oo aan fursad helo, waxaan isku dayaa inaan ku laabto Spain, ma fududa wax walba, laakiin wadnahaygu wuxuu yaalaa Madrid ayuu yiri Thibaut Courtois.